अफ्रीकाको सफारीमा जान तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ? | यात्रा समाचार
मरियम | | अफ्रिका, सुझावहरू
अफ्रिकाको सफारीमा जानु कुनै पनि यात्रीले पाउन सक्ने सबैभन्दा सम्पन्न र अविस्मरणीय अनुभव हो। यो यसको आकारको लागि र यसैले ल्याउने आश्चर्यको विशाल परिमाणको लागि यो एक अद्भुत यात्रा हो। सपना जस्तो परिदृश्यमा सनराइजको चिन्तन गर्नेदेखि लिएर जीवनको चक्रको साक्षी दिनसम्म फिल्म 'द लायन किंग' को प्रसिद्ध ध्वनि ट्र्याकमा संकलन गरिएको छ।
स्वाहिली भाषामा सफारी शब्दको अर्थ हुन्छ यात्रा। प्रत्येकको आ-आफ्नै विशेषता र आवश्यकता हुन्छ। तसर्थ, यदि तपाईं आफ्नो अर्को छुट्टीमा अफ्रिकी सफारी लिने सम्भावना विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन यात्रालाई सजिलो र आरामदायी बनाउँदछ।
1 सफारीमा जानको लागि वर्षको सबै भन्दा राम्रो मौसम के हो?
2 सफारीका लागि कुन देश उत्तम छ?
3 सफारीमा जनावरहरू हेर्नको लागि उत्तम समय के हो?
4 सफारीका लागि के प्याक गर्ने?
सफारीमा जानको लागि वर्षको सबै भन्दा राम्रो मौसम के हो?
वास्तवमा कुनै पनि मौसम अफ्रिकामा सफारीको लागि राम्रो छ तर पश्चिमी यात्रीहरूले यसलाई जुन, अगस्ट र सेप्टेम्बरमा गर्छन् जब यो सयौं जनावरहरूको वार्षिक माइग्रेसन र उनीहरूको गर्मी बिदाको साथ मिल्दछ। यस सन्दर्भमा एक मात्र नकारात्मक पक्ष यो हो कि मौसम उच्च हुन्छ र यो सफारी गर्न महँगो हुन्छ, साथै भ्रमण र आवासको उपलब्धता पाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण यी सुविधाहरूको अगाडि राम्रो योजना बनाउने सल्लाह दिइन्छ।
सफारीका लागि कुन देश उत्तम छ?
केन्या वा तान्जानिया अफ्रिकामा सफारीका लागि उत्तम विकल्पहरू हुन् किनकि त्यहाँ भ्रमण गर्ने कम्पनीहरूको संख्या प्रचुर मात्रामा छ र यस किसिमका यिनीहरूको यात्राको प्रबन्ध मिलाउँदा उनीहरूसँग धेरै अनुभव हुन्छ। थप रूपमा, यी देशहरूमा सफारीको क्रममा धेरै बढी जनावरहरू देख्न सकिन्छ, तर धेरै अन्य पर्यटकहरू। बिभिन्न टूर अपरेटर्सबाट धेरै कारहरू एउटै बथानको अघि भेट्न सजिलो छ।
यद्यपि बोत्सवाना, मोजाम्बिक, नामिबिया, जाम्बिया वा युगान्डा पनि यात्रा गर्नका लागि एकदमै रोचक ठाउँहरू छन् जसमा प्रकृतिलाई यसको सबै भव्यतामा रमाइलो गर्न सकिन्छ र उनीहरूसँग फाइदा छ कि उनीहरू यति धेरै घनिष्ठ छन् किनकि त्यहाँ पर्यटकहरूको संख्या बढेको छैन। जबकि यो सत्य हो कि तपाईले ज animals्गली जनावरहरू पत्ता लगाउन अझ कडा परिश्रम गर्नु पर्छ।
सफारीमा जनावरहरू हेर्नको लागि उत्तम समय के हो?
सफारीको समयमा जनावरहरूको मनन गर्ने उत्तम समय बिहान वा बेलुका हुन्छ किनकि यो धेरै प्रजातिको यात्राको सुरु वा अन्तको साथ मिल्छ।दिनको केन्द्रीय घण्टा भएकोले जनावरहरूले चर्को घण्टामा आराम र आराम गर्ने अवसर लिन्छन्।
जे भए पनि तपाईले धैर्यतासाथ हात राख्नुपर्नेछ किनकि सफारीमा हामी प्रकृतिको बीचमा छौं, जहाँ त्यहाँ कार्यक्रमहरू छैनन्। यद्यपि, रेंजरहरू र अन्य पार्क कामदारहरूले सँधै पर्यटकहरूका लागि उनीहरूको बहुमूल्य अनुभवको लागि धन्यवाद दिन सजिलो बनाउँदछन्।
सफारीका लागि के प्याक गर्ने?
के उचित र आवश्यक छ प्याकिंग: सामानको अधिकतम वजन भन्दा बढि जोगिन वा वास्तवमै चाहिने भन्दा बढि चीजहरू बोक्नुहोस्। सबै भन्दा सल्लाहकार चीज भनेको मूल कपडा प्याक गर्नु हो जुन तपाईंलाई संयोजनहरूसँग खेल्न अनुमति दिन्छ।
आरामदायक कपडा: कपडाको कुरा गर्दा, असहज कपडामा सफारीमा जानु भन्दा खराब कुनै विचार हुँदैन। यस प्रकारको यात्रा एक साहसिक कार्य हो, त्यसैले सफारीको पूर्ण आनन्द लिन आरामदायक लुगा र जुत्ता लगाउन सल्लाह दिइन्छ। न्यानो लुगाहरू समावेश गर्नका लागि नबिर्सनुहोस् किनभने रातमा तापक्रम ठूलो मात्रामा खस्कन सक्छ।
चहकिलो रंगबाट जोगिनुहोस्: यस प्रकारको रues्गले जनावरहरूबाट धेरै ध्यान आकर्षण गर्न सक्दछ र तिनीहरूलाई भाग्ने बनाउँदछ। खैरो, खाकी, हरियो वा हल्का पहेंलो कपडा लगाउन उत्तम हुन्छ।
सफारीका लागि सामानहरू: केहि सनग्लास, टोपी, सनस्क्रीन र लामखुट्टे को विक्रेता तपाईंको आवश्यक सामान हुनेछ जब तपाईं सफारीमा जानुहुन्छ।
टेक्नोलोजी: अफ्रिकाको सफारीमा, हो वा हो, तपाईंलाई त्यस्तो अविश्वसनीय यात्रा अमर पार्नको लागि राम्रो क्यामेरा चाहिन्छ। यसको साथसाथै तपाईंलाई अतिरिक्त ब्याट्री, चार्जर र अर्को मेमोरी कार्ड चाहिन्छ।
यात्राको लागि कागजात: चोरी वा हराएको खण्डमा डराउनबाट बच्न, हाम्रो मूल कागजातको धेरै फोटोकपीहरू बनाउन सिफारिस गरिन्छ (राहदानी, बीमा नीति, ट्राभलर चेक, भिसा र क्रेडिट कार्ड) र प्रतिलिपि र मूल छुट्टै राख्नुहोस्।
चिकित्सा बीमा: धेरै देशहरूमा अस्पताल भर्ती खर्च बिरामीले लिन्छ र यो धेरै महँगो हुन सक्छ। त्यसकारण सफारीको बखत बिरामी वा दुर्घटना भएमा पूर्ण कभरेज सुनिश्चित गर्ने चिकित्सा बीमा लिन सिफारिस गरिन्छ। यात्रा बीमाले हामीलाई चोरी, उडान वा सामान हराउँदामा पनि मद्दत गर्दछ।
मुद्रा: यो सँधै सल्लाह दिइन्छ तपाईको सुटकेसमा पहिल्यै परिवर्तन गरिएको केहि नगद सम्भावित अप्रत्याशित घटनाहरूसँग डिल गर्न सल्लाह दिइन्छ। यसले अन्य भुक्तानीका साधनहरू जस्तै यात्रीको चेक वा क्रेडिट कार्डहरू बोक्न पनि चोट पुर्‍याउँदैन।
के तपाई कहिल्यै अफ्रिकाको सफारीमा जानु भएको छ? अरू के सुझावहरू बनाउँदा तपाई महत्त्वपूर्ण बनाउनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अफ्रिका » अफ्रीकाको सफारीमा जान तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ?